65 Van | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari65 Van
Si loo yareeyo faafidda cudurka faafa ee coronavirus, Dowlada hoose ee degmada 'Mun Metropolitan' waxay ugu yeertay Muwaadiniinta in ay gurigooda joogaan iyagoo ku dhejiyay 'Guriga joog' nalka casaanka '' guriga tag '' nalka cagaaran. caafimaadka [More ...]
Galida iyo bixida ayaa joogsaday Wadada Xuduudaha ee Kapıköy
Soo galitaanka iyo bixitaanka rakaabka Van Kapıköy Black Border Gate ee xadka Iran ayaa si kumeel gaar ah loo joojiyay 24.00:XNUMX caawa. Hoos u dhigga rakaabka soo galaya iyo ka bixida Xerada Xerada Madow ee Kapıköy xannibaadda awgeed, Iran [More ...]
Tareenada xamuulka ee ka gudbayay habka ku-tallaalidda ee xadka Kapıköy ayaa la raray kadib markii ay sugayeen 4 saacadood oo ka baxsan saldhigga. Laga bilaabo 23 Febraayo 2020, dhammaan tareennada waxaa loo isticmaalaa in lagula dagaallamo dillaaca coronavirus adduunka oo dhan. [More ...]
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Van ayaa la Badbaadiyay 10-kii
Dawlada Hoose ee Magaalada Caabudwaaq ayaa ka joojisay dhammaan gaadiidleyda dadweynaha ee magaalada oo dhan ka dhanka ah nooca cusub ee loo yaqaan 'coronavirus'. Kooxaha booliiska ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay goobaha madadaalada dadweynaha iyo goobaha madaddaalada. Coronavirus ee Van [More ...]
Gawaarida dadweynaha ee qaada kumanaan kun oo muwaadiniin ah maalin walba oo ku sugan Van ayaa loo jeermiyaa si looga hortago suurta galnimada in viruska Corona, cudurada faafa iyo cudurada faafa. Ka soo baxaya Shiinaha oo khatar ku haya adduunka oo dhan [More ...]
Mashruuca 'Beddelka Gaarka ah Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay', oo lagu bilaabay hoggaanka degmada Caasimadda 'Van Metropolitan', ayaa bilaabay wajigiisa hirgelinta. Mashruuc muhiim ah oo ka mid ah mashruuca loogu talagalay in wax laga beddelo 45 basaska dadweynaha ah oo u adeega 104 jid oo ku yaal bartamaha magaalada Van. [More ...]
Sanadkii la soo dhaafay burburiyeen Republic of Turkey xiran Cord Pier iyo Beach Park by Tareennada iyo sii wadaan in ay ku sii on ajandaha laga doodayo. Sugitaanka ayaa yaraaday ilaa sanadkii hore iyo [More ...]
Wadada Van Iskele ee Xeebta ayaa loo beddelay Tareen
Wadada İskele oo dhan ee xeebta, oo ku taala degmada İskele ee degmada Tusba, oo ka mid ah astaamaha Van, ayaa loo rogay tareen. Wadada xeebta ee İskele ee degmada İskele ee degmada Tusba, waa mid ka mid ah astaamaha Van. [More ...]
U ogolow Vangölü Wharf Beach iyo Wharf Ferry Park Go Public Again
Iskele Park iyo Kordonu, oo si lama filaan ah loogu gubay oo dadweynuhu u xidhnaayeen bishii Maarso ee sannadkii hore, ayaa burburay muddo ka badan hal sano. Waxaa la sheegay in si dhakhso leh loo abaabuli doono mashruucan cusub marka la burburiyo. [More ...]
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Jeegaan
Degmooyinka Van Metropolitan iyo Waaxda Laanta Ilaalada Wadooyinka ee Qeybta Booliska ayaa gacanta ku dhigay gaadiidleyda dadweynaha guud ahaan magaalada. Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Assoc. Dr. Metropolitan leh Ali Özvan [More ...]
Rakaabku waxay kaxaysteen 1 Wakhti oo ah Dadweynaha Van ee Sannadka 10 iyagoo wata Kaarka BELVAN
Dowlada hoose ee magaalada 'Van Metropolitan District' waxay qaadday 2019 milyan 10 kun 856 qof sanadka 579 'oo ah' Nidaamka aruurinta Lacagta Elektroonikada ah '(BELVAN CARD). Neef cusub oo gaadiid magaalada ah oo leh Nidaamka Ururinta Lacagta Elektarooniga ah iyo joogsiga smart [More ...]
Rajada laga qabo Vangölü Express Adventure waa mid Weyn!
Tayeynta 'Vangölü Express', oo billowday bishii Janaayo ee sanadkii hore, ayaa si aan joogsi lahayn u sii soconeysey sanadka oo dhan. Van, oo ah barta ugu dambeysa ee hal-abuurka, ayaa u noqday bar-tilmaameedka safarrayaasha taariikhdiisa, quruxdeeda iyo dabeecaddeeda. Dhallinyar [More ...]
TCDD Waxay Raadineysaa Daaweyn Ku Saabsan Shilalka Dhacdooyinka Tareenka
TCDD waxay raadineysaa dawooyin lagu miroodo oo qatar ku ah amniga nolosha iyo hantida tareenka. 2019, tareenka 327 wuxuu ahaa dhulka. Daaqadaha Wagon ayaa qarxay dhacdooyinka shiidan awgood. Dad badan ayaa ku dhaawacmay darawalka ilaa darawalka; kumanaan [More ...]
29 ee Gaadiidka Van ee Bilaashka ah ee Oktoobar
Go'aanka ay gaadheen Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada 'Metro Metroitanitan Council', basaska dawlada hoose waxay bilaash ku noqon doonaan Maalinta Oktoobar Republic. 29 oo ah aasaaska Jamhuuriyadda ee Van. Si loo fududeeyo ka qeybgalka xafladaha iyo munaasabadaha, [More ...]
Basas Koronto oo Cusub oo Riyo Gaaraya Van
Van wuxuu sanado badan sugayay hannaan cusub oo gaadiid iyo gaadiid dadweyne ah. Gaar ahaan sanadkii hore, mashruuca lagu abuurayo ra'yi guud oo aad u xun oo ku saabsan taraamka [More ...]
Vangolu Express Duullimaadyada Duullimaadyada iyo Qandaraaska Tareenka
Meelo badan oo ka mid ah tareenada magaalada waxaa ka mid ah tareenka TCDD, oo u dhaxeeya Ankara iyo Tatvan, oo dhex maraya buuraha buuraha dhexdoodana u gudubaya quruxda dabiiciga ah. Yaa doonaya inuu u tago Van oo safar wanaagsan leh [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Uygun ayaa baaritaan ku sameeyay Saldhigga Van Kapikoy
Maareeyaha guud ee TCDD, Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha guud Erol Arıkan oo ay weheliso baaxadda dalxiiska, Van Kapikoy Station ayaa indha indheyn ku sameeyay. Wadada laamiga ah ee soo dejinta iyo dhoofinta [More ...]
Mashruuca Van Logistics Center ee loogu talagalay gacmo-qabadyada!
Goobtan, ayaa laamaha la duubay mashruuca Van Logistics Center, taas oo Van, oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka iyo waddankaba u noqon doona xarun agab. Waxay labadaba xoojineysaa booska Van [More ...]
Tareenka Tehran ee Van Trenger oo bilaabay Duulimaadyo!
Tehran Van adeeg tareen rakaab siday u dhexeeya Turkey iyo Iran ee Waqtiga maxaliga ah ee June 24 09: 30 adeego sidii başladı.tr, fiidkii of Tabriz, subax 25 06.00 of June gaari doonto ku dhowaad Van. Furitaanka Tehran [More ...]
Waddada khatarta ah ee Van ayaa dib loo dhigi doonaa damaanad
Wadada, oo ay qandaraas ku siisay Van Metropolitan Municipal ee 2018 oo leh khalad qandaraasle, dib ayaa loo bixin doonaa. Qeybta Dayactirka Wadada Van ee Dowlada Hoose iyo Qeybta Dayactirka ee 2018 [More ...]
Masaafada Bulshada ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Wadooyinka Gaadiidka Isbitaalka Magaalada Başakşehir ee ay joojiyeen Maamulka ExBB Ex-Maamulka
Khidmada Terminal kama qaadan doono Ganacsatada Minibus ee İzmir
Spiked Corona Virus Digniin ee Laydhka Wadooyinka ee Elbistan
Khadka Isgaarsiinta TCDD 444 8 233